eNasha.com - विक्रमको फड्को
चितवन वरपर समाजसेवी विक्रम पाण्डेलाई कसले पो नचिन्ला ! अझ चितवनका लाखौँ श्रोताले सुन्ने कालिका एफएमका प्रबन्ध सञ्चालक भनेपछि त नचिन्ने कुरै भएन । यी समाजसेवीले अहिले यस्तो घोषणा गरेका छन्, जसका कारण रेडियो चलाउने र सुन्ने स्रोताहरु छक्क परेका छन् । उनले अहिले कालिका एफएमसँगै ९१ एफएम चलाउने घोषणा गरेका छन् । यो एफएमले २४ सै घण्टा सङ्गीत मात्र बजाउने बताइएको छ ।
किन त नयाँ च्यानलको आवश्यकता - "सबैभन्दा लोकप्रिय च्यानल भएका कारण कालिका एफएममा सङ्गीत बजाउने समय ज्यादै थोरै भयो भनी गाउँगाउँबाट गुनासा आएका कारण हामीले यो च्यानल थप्नु परेको हो", कालिका एफएमका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डे भन्छन्- "हामीले गाउँगाउँका ती आवाजविहीनहरुको आवाज सुनेर यो निर्णय गरेका हौँ ।"
यो रेडियोको परीक्षण प्रसारण मंगलबार साउन १ बाट शुरु भइसकेको छ । शुरुका १५/२० दिन १८ घण्टा प्रसारण हुने भए पनि पछि २४ सै घण्टा यो एफएम प्रसारण हुने पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार चितवन क्षेत्र राजमार्गको क्षेत्र भएका कारण यहाँ चौबीसै घण्टा मान्छेको चहलपहल र आउजाउ भइरहन्छ । यस्तो बेला चितवन वरपर प्रवेश गर्नेबित्तिकै चौबीसै घण्टा रेडियोमा राम्राराम्रा गीतसङ्गीत सुन्न पाउँदा श्रोताहरुको मन प्रफुल्ल हुने उनको दाबी छ ।
प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेका अनुसार यो रेडियोमा विज्ञापन नबजाउने नीति लिइएको छ । जसका कारण श्रोताहरुले बिनाकुनै अवरोध पूरा गीत सुन्न पाउने छन् ।
"यस किसिमको रेडियो नेपालमा त पहिलो हुँदै हो, विश्वमा पनि कम छन् भन्ने सुनेको छु । बेलायतमा त एउटै मात्र रहेछ !" पाण्डे गर्व गर्छन् ।
ट्रयाक बाहिर लुकेका कुरा क्या बात ! सङ्गीतकार रिलिज समुद्रपार नेपाली तारा कीर्तिमान तातोपीरो अवार्ड उपलब्धि भिडन्त विचार पेज थ्री गायक गायिका प्रेम र विवाह रुचि कन्सर्ट हल्ला